China Intumescent inopisa moto chisimbiso fekitori uye vagadziri | Weicheng
Chigadzirwa Chigadzirwa Inopisa moto isina chisimbiso
Chigadzirwa Makomborero Vhoriyamu inowedzera kanopfuura ka5 mumoto, ine kusununguka kwakanaka uye kunamatira, uye inogadzira dense network mamiriro mushure mekutsva mumoto; inogona kunyatso kudzivirira murazvo uye kupisa kupisa; yakakwirira kunyatsoshanda murazvo retardant, nyore kuvaka
Makuriro Ekushandisa 1.Surface yekuisa chisimbiso kwenzvimbo dzakadzingwa pasi slab mipata, madziro caulking, mepombi dzemuchina, pombi dzekufefetedza, pombi dzekupisa, etc. majoini pakati pemadziro epamusoro uye pasi slabs; 3. Mapaipi epurasitiki (≤50mm) mukaha wekupinda; mukaha wekupinda kwenzira yeHVAC
Kazhinji, chisimbiso chemoto chinoedzwa nenzira yakatwasuka. Zvinoenderana nemuedzo wekuyedza, unogona kukamurwa kuita FV-0, Fv-1 uye Fv-2 kubva kumusoro kusvika pasi. Inonyanya kushandiswa kuisirwa keteni kumadziro isina moto chimiro, uye inoda kugona kweanopokana nekushomeka deformation uye moto uye utsi kudzivirira, Acrylic acid moto-chiratidzo chisimbiso inoenderana nepfuti mhando. Iyo moto-chiratidzo sealant pfungwa chiyero mhando moto-proof zvinhu imhando yepolymer yekuisa chisimbiso zvinhu zvekuvhara, izvo zvine hunyanzvi hwekuita kwekuisa chisimbiso uye moto-chiratidzo, uye inokodzera moto-chiratidzo kuvaka. Nzvimbo yekuvaka inosanganisira mapaipi esimbi, mapaipi ekudzivirira kupisa uye majoini ekuvaka. Iwo matanda anonamira anoshandiswa pamoto-chiratidzo mikova ye fire-proof sealant expression haigone kusangana nezvinodiwa nemoto, Kutarisa tarisa kuti hapana madonhwe machena ezvinhu zvisingatsve pamabhande erabha. Kana iwe ukashandisa chakareruka kuvhenekera, chii chimwe, kana iwe ukasangogadza kuisa sealant mitsetse, iyo yekudzivirira moto uye utsi hwekuzviparadzanisa basa rematare esimbi mikova inokanganiswa zvakanyanya.
Pashure: Gumbeze remoto
Zvadaro: Flexible organic plugging zvinhu zve intumescent fireproof chisimbiso